Enomtsalane Central Apartment Ploiesti - I-Airbnb
Enomtsalane Central Apartment Ploiesti
Indawo esembindini wePloiesti, indawo yethu yale mihla nentle ihlaziywe ngokupheleleyo yaze yahlaziywa ngoNovemba ka-2014, ibonelela ngendawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu. Yonwabela indawo emangalisayo kumbindi wedolophu yasePloiesti kwaye uzive isixeko sinakho konke onako!
Ifumaneka kweyona ndawo isembindini wePloiesti, indawo yethu yokuhlala ixhotyiswe ngcono kunegumbi lehotele elineenkwenkwezi ezi-4, elinegumbi elinye lokulala kunye negumbi lokuhlala, elihlala abantu ukuya kuthi ga kwi-4.
Le ndlu ibekwe kumgangatho wokuqala wesakhiwo esiyimbali esisembindini wedolophu yasePloiesti, kwisitalato sabahambi ngeenyawo, kwaye ijikelezwe zizo zonke izibonelelo onokuthi uzifune njengomkhenkethi - iibhanki, iivenkile zokutyela, imivalo, izikhumbuzo kunye neevenkile zakudala, iikhemesti. , iivenkile zokuthenga, iivenkile zokutya, iiofisi zokutshintshiselana kunye nabanye abaninzi-uyibiza ngegama. Uphakathi kwayo yonke into. IPloiesti sisixeko esizolileyo nesikhuselekileyo, kodwa idolophu yaso ikhuseleke ngakumbi - ke ulungile, phumla kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho.
Eyona nto ilungileyo malunga nedolophu yasePloiesti kukuba unokufikelela kwezona ndawo zibalulekileyo zesixeko. Okokuqala, ukuba awuhambi ngemoto, kukho izikhululo zebhasi ezikufutshane kakhulu nefulethi kunye nesikhululo seeteksi kanye ngaphandle kwesakhiwo, ukuze ukwazi ukujikeleza isixeko ngokulula. Kukho imivalo kunye neendawo zokutyela ngaphakathi komgama wokuhamba, iipaki ezimbini zikwangumzuzu o-1 kunye nezinye izibonelelo ezifana neekhemesti, iivenkile zegrosari, iivenkile zokuthenga njl. imivalo kunye neendawo zokutyela kunye nezakhiwo zembali ukujonga.
Iindwendwe ziya kuhlangana nathi ekungeneni nasekuphumeni, kodwa sifumaneka nanini na iingcebiso, iingcebiso kunye neengcebiso zokuchitha ixesha lokuphumla okanye ukutyelela iindawo ezikufutshane.